कोभिड-१९ खोपहरु | City of Somerville
कोभिड-१९ खोप तथा सिटिका अन्य आकष्मिक जानकारी पाँउनका लागी सिटि अलर्टसमा नाम दर्ता गर्नुहोस्
मैले के थाहा पाँऊनु आवश्यक छ?
कोभिड-१९ खोपहरू अब ५ बर्ष वा सो भन्दा माथि उमेरका सबैका लागि उपलब्ध छन् ।तपाइँले पहिल्यै नाम दर्ता गर्नु आवश्यकता छैन । तर तपाइँ अग्रिम नाम-दर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्छ । सबै खोप स्थलहरुले नि:शुल्क खोपहरु प्रदान गर्दछन् । खोपका लागी तपाँईको आप्रवासन वा स्वास्थ्य बीमा स्थितिको जानकारीका बावजूद उपलब्ध छन् ।
विना अग्रिम नाम दर्ता नै खोपहरु तल उल्लेखित स्थानहरुमा उपलब्ध छन् ।
सि.एच.ए. समरभिलखोप केन्द्र
१७६ समरभिल एभिन्यु, समरभिल, म्यासाच्युसेट्स् ०२१४३
सोमबार, मंगलबार: बिहान ११:०० – साँझ ६:३० बजे
बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार: बिहान ८:३० – दिँऊसो ४:०० बजे
वैकल्पिकः अग्रिम नाम दर्ता गर्न मा हेर्नुहोस् ।
स्थानीय औषधालयहरुमा खोप उपलब्धता वा आपूर्तिका बारेमा र विना नाम दर्ता खोप उपलब्धका बारेमा जानकारीका लागी । मा जानुहोस् । अग्रिम नाम दर्ता सिफारिस गरिएको छ । औषधालय खुल्ने समयको जानकारीका लागी तपाइँको स्थानीय औषधालयसंग सम्पर्क गर्नुहोस् ।
म्यासाच्युसेट्समा कहीं पनि खोप स्थलहरुको खोजीका लागी Vaxfinder.mass.gov मा हेर्नुहोस् वा २११ मा फोन गर्नुहोस् ।
तपाइँको प्राथमिक हेरचाह प्रदायकसंग सम्पर्क गर्नुहोस् । समरभिलमा सि.एच.ए. र मास जनरल ब्रिहघंम अस्पतालको खोप स्थलहरू रहेछन् । सि.एच.ए.का बिरामीहरूले सि.एच.ए. खोप हटलाइन (६१७)६६५-१९९५ मा फोन गर्नुपर्दछ वा सि.एच.ए.को माईचार्ट मा गएर खोप तालिकाको लागि नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ । मास जनरल ब्रिहघंम अस्पतालका बिरामीहरूले बिरामी गेटवे मा गएर खोपका लागी नाम दर्ता गर्न सक्दछन् ।
सिटिको खोप बारे अग्रिम जानकारी पाउनको लागी मा गएर आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोस् । यसले तपाँईलाई नवीनतम स्थानीय जानकारी र घुम्ति खोप शिविरको जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
कोभिड-१९ बूस्टर खोपका मात्राहरू
बूस्टर खोपहरू १२ बर्ष र माथि उमेरका सबै व्यक्तिहरूको लागि अनुमोदन गरिएको छ।
तपाईं बूस्टरको लागि योग्य हुनुहुन्छ यदि:
तपाईंले फाईजर वा मोर्डना कोभिड-१९ खोपको दोस्रो मात्रा कम्तिमा ५ महिना अघि प्राप्त गर्नुभएको थियो,
तपाईंले कम्तिमा २ महिना अघि जोण्सन एण्ड जोण्सन कोभिड-१९ खोप प्राप्त गर्नुभएको थियो,
तपाँईं १८ बर्ष वा माथि उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाँईंले पहिले प्राप्त गर्नुभएको कोभिड-१९ खोपको प्रकारको वास्ता नगरी तपाईंले कुनै पनि कोभिड-१९ को बूस्टर खोपको मात्रा लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाँईं १२-१७ बर्ष उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाईंले फाईजरको बूस्टर खोपको मात्रा लिन सक्नुहुन्छ।
तपाँईं बूस्टर खोपको दोस्रो मात्रा लिनको लागि योग्य हुनुहुन्छ यदि तपाईंले:
तपाँईंले फाईजर वा मोर्डना कोभिड-१९ खोपको तेस्रो मात्रा कम्तिमा ४ महिनाअघि प्राप्त गर्नुभएको थियो र तपाँईं ५० वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरको हुनुहुन्छ,
तपाँईंले फाईजर वा मोर्डना कोभिड-१९ खोपको तेस्रो मात्र कम्तिमा ४ महिनाअघि प्राप्त गर्नुभएको थियो र तपाँईं १२ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरको हुनुहुन्छ र तपाँई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागी लडिरहनु भएको छ,
तपाँईंले कम्तिमा ४ महिना अघि जोन्सन एण्ड जोन्सन कोभिड-१९ खोपको दोस्रो मात्रा प्राप्त गर्नुभएको थियो।
कोभिड-१९ खोप तथा बूस्टर खोपका बारेमा थप जानकारीको लागि वा यस सम्बन्धी सल्लाह/सुझावका लागी सि.डि.स.को यो https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html वेवसाईडमा जानुहोस्।
सहयोग चाहिन्छ? सिटिको ३११ (६१७-६६६-३३११) मा फोन गर्नुहोस् । खोपहरू पहुँचमा अवरोधको सामना गरिरहेका वासिन्दाहरुलाई यातायात वा भाषामा सहयोग गर्नका लागि सिटिका कर्मचारीहरू उपलब्ध छन् ।
बूस्टर खोपहरू अब १८+ उमेरका सबैका लागि उपलब्ध छन्:
रोग नियन्त्रण केन्द्रहरू https://www.cdc.gov/coronavirus ले सबै वयस्कहरूको लागि कोभिड-१९ बूस्टर खोपहरू अनुमोदन गरेको छ। यसको मतलब यदि तपाइँ १८ वर्षको हुनुहुन्छ र तपाइँले फाईजर वा मोडर्ना खोपको दोस्रो मात्रा प्राप्त गरेको कम्तिमा छ महिना वा जन्सन एण्ड जन्सन खोप प्राप्त गर्को कम्तिमा दुई महिना भैसकेको छ भने तपाइँ तुरुन्तै कुनै पनि कोभिड-१९ खोप सुविधा भएका फार्मेसीहरुमा कोभिड-१९ बूस्टर खोप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बूस्टर खोपहरू प्रतिरक्षा बढाउने तरिकाको रूपमा दृढतापूर्वक सिफारिस गरिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने प्रारम्भिक मात्रबाट प्राप्त प्रतिरक्षा समयसँगै घट्दै जान्छ। राज्यले बूस्टर खोपहरूको बारेमा निरन्तर सोधिने प्रश्नहरूको सूची https://www.mass.gov/info-details/covid-19-booster-frequently-asked-questions मा राखेको छ। जानकारीको लागि तीन मुख्य कुराहरूः तिनीहरू सुरक्षित, निःशुल्क, र सहजै उपलब्ध छन् र यसमा तपाईंको वैधानिक स्थितिको पर्वाह गरिदैन।
बूस्टर खोपहरू तथा प्रारम्भिक खोपहरू कहाँ प्राप्त गर्ने:
बूस्टर खोपहरू आगामी जाडो महिनाहरूमा रोगको फैलावट कम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास हुनेछन्। यसका लागी पहिलो प्रयास हाम्रो सुझाव युनियन स्क्वायर नजिकै टार्गेट शपिंग प्लाजामा सि.एच.ए. https://www.challiance.org/ खोप केन्द्र हो। यो खोप स्थलमा विना नाम दर्ता वा अग्रिम नाम दर्ता दुबै अवस्थामा खोप उपलब्ध छन् (यद्यपि अग्रिम-नाम-दर्ताले तपाईंको खोप प्राप्त गर्ने र पर्खने समयलाई कम गर्न सक्छ)। सि.एच.ए.ले ५+ उमेरका लागि कोभिड-१९ प्रारम्भिक खोपहरू बाहेक सबै खोपहरूका लागि बूस्टर खोपहरू प्रदान गर्दछ। बूस्टर खोप प्राप्त गर्दा एउटा सल्लाहा: खोप प्रकृया छिटो अगाडि बढाउनका लागि आफ्नो खोप कार्ड ल्याउनुहोस्। खोपका अन्य विकल्पहरूका लागी स्थानीय फार्मेसीहरू पनि समावेश छन् (यसमा अग्रिम-नाम-दर्ता आवश्यक हुन सक्छ)। तपाईंको प्राथमिक स्वास्थ प्रदायक www.vaxfinder.mass.gov मा वा २११ मा फोन गरेर सम्पर्क गर्नुहोस्।
५ देखि ११ वर्षका बालबालिकाका लागि खोपहरु स्वीकृत:
संघीय अधिकारीहरूले फाइजरको कोभिड-१९ खोपको सानो मात्रा ५ बर्ष देखि ११ वर्षका बालबालिकाहरूका लागि स्विकृत गरेका छन्। रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सि.डि.सि.) ले ५ वर्ष र सोभन्दा माथिका बालबालिकाहरूलाई रोग विरुद्धको खोप सिफारिस गरेको हो। सि.डि.सि.सँग आफ्ना बच्चाहरूलाई खोप लगाउने बारेमा प्रश्नहरू भएका अभिभावकहरूका लागि विस्तृत जानकारी उपलब्ध छ। सि.डी.सी.का अनुसार बालबालिकाहरूमा वयस्कहरूको तुलनामा कोभिड-१९ बाट गम्भीर बिरामी हुने जोखिम कम भए तापनि बच्चाहरूमा यसले निम्न असर गर्न सक्छ:
कोभिड-१९ निम्त्याउने भाइरसबाट संक्रमित हुने,
कोभिड-१९ बाट धेरै बिरामी हुने,
कोभिड-१९ बाट छोटो र दीर्घकालीन स्वास्थ्य जटिलताहरू आउने,
कोभिड-१९ अरूलाई फैलाउने।
५ बर्ष देखि ११ वर्षका बालबालिकाको लागी कोभिड-१९ खोपको स्थानीय विकल्पहरू निम्न बमोजिम समावेश छन्। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि सबै बच्चाहरूको खोपको लागि आमाबाबु वा अभिभावक साथ हुनुपर्छ:
१७६ समरभिल एभिन्यु (युनियन स्क्वायर टार्गेटको छेउमा) मा रहेको सि.एच.ए. समरभिल खोप केन्द्र https://www.challiance.org/patients-visitors/covid-19-vaccine मा विना नाम दर्ता खोप, सोमबार, नोभेम्बर ८ बाट बालबालिकाको लागी खोप प्रदान गर्न सुरु गरिने,
स्थानीय सिभिएस र वालग्रीन फार्मेसीहरू,
बाल रोग विशेषज्ञका कार्यालयहरू: कृपया आफ्नो स्वास्थ्य प्रदायकसँग सोध्नुहोस्,
"खोपहरू (५-११वर्ष)" चयन गरेर www.vaxfinder.mass.gov मा वा २-१-१ मा फोन गरेर ५-११ वर्षका बालबालिकाहरूलाई कोभिड-१९ खोपहरू उपलब्ध गराउने ठाउँ खोज्नुहोस्। स्थानहरू दैनिक सोमबार-शुक्रबार अद्यावधिक गरिनेछन्।
समरभिल बिद्यालयको के.-८ बिद्यालय स्थलहरूमा बिद्यालय-प्रायोजित खोप केन्द्रहरू जुन समरभिल बिद्यालयहरूद्वारा अभिभावकहरूलाई जानकारी गराईनेछ।
सिटि-प्रायोजित खोप केन्द्रका जानकारीहरू www.somervillema.gov/vaccine र www.somervillema.gov मा सहित सिटिका अन्य सञ्चार माध्यामहरू https://www.somervillema.gov/page/alerts मार्फत घोषणा गरिनेछ।
यस सम्बन्धी सबैभन्दा नवीनतम जानकारीको लागि कृपया राज्यको वेबसाइट www.mass.gov/covid वा www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccinations-for-children-ages-5-11 मा जाँच हेर्नुहोस्।
सेप्टेम्बर २७ २०२१
एफ.डी.ए. र सी.डी.सी.ले कोभिड-१९ फाइजर खोपको थप मात्रा केही निश्चित जनसंख्याको लागी अनुमोदन गरेका छन् । कोभिड-१९ फाइजर खोपको थप मात्राहरु अब उपलब्ध छन्:
६५ वर्ष वा माथिका व्यक्तिहरु ।
१८-६४ वर्ष उमेरका व्यक्तिहरु जसको केहि अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्थाहरुको कारण कोभिड-१९ को गम्भीर जोखिम रहेको कुरा सीडीसी द्वारा (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-preferences/people-with-medical-conditions.html) परिभाषित गरिएको छ ।
१८-६४ बर्ष उमेरका व्यक्तिहरु जो व्यावसायिक वा संस्थागत अवस्था वा बनौटको कारणले कोभिड-१९ को बढि जोखिममा छन् ।
यी कोटिहरु व्यक्तिहरु कोभिड-१९ फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा प्राप्त गरेको कम्तिमा ६महिना पछि मात्र फाइजर खोपको थप मात्रा प्राप्त गर्न लागी योग्य हुनेछन् । यसका लागी तपाइँ www.mass.gov/covid-19-vaccine मा गएर आफु यो खोपका लागी योग्य भए/नभएको जाँच गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाइँले फाइजर खोपको थप मात्रा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ?:
म्यासाच्युसेट्स राज्यमा खोपको थप मात्रा उपलब्ध हुने स्थानहरुको बारेमा जानकारी पाँउनको लागी www.Vaxfinder.mass.gov मा जानुहोस् र उपयुक्त कोष्टमा चिन्ह लगाउनुहोस् ।
तपाइँलाई सुविधाजनक स्थान खोज्नका लागी २-१-१ मा फोन गर्नुहोस् । त्यहाँ भाषा सहयोग पनि उपलब्ध छ ।
सि.एच.ए. समरभिल खोप केन्द्र मा जानुहोस् ।
थप जानकारीको लागी म्यासाच्युसेट्स जनस्वास्थ्य विभागको कोभिड-१९ को थप मात्रा बारेको प्रश्न-उत्तर सेवा https://www.mass.gov/info-details/covid-19-booster-frequently-asked-questions मा जानुहोस् । यदि तपाइँलाई कोभिड-१९ खोप र स्थलहरु खोज्नको लागी अतिरिक्त सहायताको आवश्यकता छ भने कृपया समरभिल सिटिको ३११ (६१७-६६६-३३११) मा फोन गर्नुहोस् ।
अगस्त २१, २०२१
अगस्त १३ मा, एफ.डी.ए. र सी.डी.सी.ले मोर्डना र फाइजर खोपको तेस्रो मात्रलाई केहि व्यक्तिहरुको लागी अनुमोदन गरेका छन । जसले फाइजर वा मोर्डेना खोपको दुई मात्रा प्राप्त गरेका छन् र मध्यम रूपमा उनिहरु गम्भीर प्रतिरक्षा विहीन छन् भने https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html उनिहरुलाई खोपको तेस्रो मात्रा उपलब्ध हुनेछ । यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ फाइजर वा मोडर्ना खोपको तेस्रो मात्राको लागी योग्य हुन सक्नुहुन्छ, कृपया तपाइँको डाक्टर संग परामर्श गर्नुहोस् । थप जानकारीको लागी म्यासाच्युसेट्सको जनस्वास्थ्य विभागको कोभिड-१९ थप खोप मात्राको प्रश्न/उत्तर भाग मा https://www.mass.gov/info-details/covid-19-booster-frequently-asked-questions जानुहोस् ।
कोभिड-१९ खोपहरू अब १२ बर्ष वा सो भन्दा माथि उमेरका सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१८ बर्ष भन्दा मुनिका जो कोहीलाई अभिभावकको अनुमति चाहिन्छ । धेरै खोप स्थलहरू अब विना अग्रिम नाम दर्ता खुल्ला छन् । खोप स्थल फेला पार्नका लागी vaxfinder.mass.gov मा जानुहोस् ।
आज मे ६ बिहान ११:०० बजे देखी ४:०० बजे सम्म १६१ कलेज एभेन्यु, मेडफोर्ड स्थित टफ्ट्स् विष्वबिद्यालयको ग्यान्चर सेन्टरमा हिडेर जान मिल्ने घुम्ती खोप केन्द्र (फाईजर) सञ्चालन हुदैछ ।
खोपका लागी अग्रिम नाम दर्ता आवश्यक छैन । १८ बर्ष मुनिका व्यक्तिलाई भने साथमा अभिभावक वा अभिभावकको अनुमति चाहिन्छ । सहयोग चाहिन्छ ? ३११ नं. मा फोन गर्नुहोस् ।
क्याम्ब्रिज हेल्थ एलायन्स, टफ्ट्स युनिवर्सिटी, र समरभिल सिटि लगायत नौ समुदायले सुरू गरेको नयाँ क्षेत्रीय कोभिड-१९ खोप सहयोगी केही स्थलहरू https://www.somervillema.gov/vaccinepartnership अब आजबाट खुला हुदैछन् वा केही अर्को हप्ताबाट प्रारम्भमा हुनेछन्:
हाल खुल्ला: टफट्स युनिवर्सिटी गैन्चर सेन्टर, १६१ कलेज एभेन्यु, मेडफोर्ड
हाल खुल्ला: ईन्कोर बष्टन हार्बर, १ ब्रॉडवे केन्द्र, एभरेट
छिटो खुल्दै: सि.एच.ए. समरभिल (अर्को लक्ष्य), १७६ समरभिल एभेन्यु, समरभिल
तपाईं यहाँ यी स्थलहरूका लागी समय तालिकमा समावेश हुन आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ:
तपाँई https://home.color.com/vaccine/register/metronorth मा गएर वा २११ मा फोन गरेर आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोस् । यदि तपाईंलाई नाम दर्ताको लागि सहयोग चाहिन्छ वा खोपको लागि याताया वा अन्य सहयोग चाहिन्छ भने कृपया ३११ (६१७)६६६- ३३११ मा फोन गर्नुहोस् ।
राज्यले आफ्ना निवासीहरू यही मार्च १२ शुक्रवार देखि राज्यका खोप स्थलहरुमा खोप लगाउनका लागी अग्रिम नाम दर्ता गर्न योग्य हुने घोषणा गर्यो । अग्रिम नाम दर्ता गर्न www.mass.gov/COVIDvaccine मा जान वा २११ फोन गर्न सक्नु हुनेछ । नाम दर्ता गरेपछि निवासीहरुलाई यसको पुष्टिका लागी एकपटक र त्यसपछि तिनीहरूको अद्यावधिक स्थितिको बारे फोन, टेक्स्ट, वा ईमेल मार्फत साप्ताहिक रुपमा जानकारी उपलब्ध हुनेछ । एक पटक खोपका लागी समय तालिका उपलब्ध भएपछि बासिन्दाहरूलाई यसबारे तत्काल सूचित गरिनेछ र उक्त सुचनाको २४ घण्टा भित्रमा सो खोप तालिका स्वीर गर्नुपर्नेछ ।
राज्यले प्राथमिक कक्षा देखी १२ कक्षा सम्मका शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारीहरू, र बालबच्चा हेरचाहकर्मीहरू बिहीबार, मार्च ११ बाट कोभिड-१९ खोपका लागि नाम दर्ता गर्न योग्य हुने घोषणा गरेको छ । कोभिड-१९ खोप लिनका लागी समयतालिका निर्धारण गर्न राज्यको www.mass.gov/vaccine साइटमा मा हेर्नुहोस् वा २११ फोन गर्नुहोस् । ध्यान दिनुहोस् कि फोन गरेर पर्खनु पर्ने समय लामो हुनसक्दछ । त्यसैले कृपया धैर्य गर्नुहोस् । कृपया यो पनि ध्यान दिनुहोस् की यस समयमा सिटिलाई खोपहरु प्रदान गरिएको छैन र सिटिले स्थानीय स्तरमा खोप समयतालिका निर्धारण गर्न सक्दैन ।
समरभिल सिटिमा यातायात वा भाषाका कारण खोपमा पहुँच पुग्न अवरोधको सामना गरीरहनु भएका वासिन्दाहरुका लागी भाषा तथा यातायातमा पनि सहयोग उपलब्ध छ । यदि तपाईं हाल खोप प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ र खोपका स्रोतहरुमा पहुँचका लागी सहयोग चाहिएको छ भने कृपया ३११ मा फोन गर्नुहोस् ।
यस सम्बन्धमा थप जानकारीको लागि, वा तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तरका लागी, वा अन्य जानकारी मूलक बिषयका लागी समरभिल सिटिको www.somervillema.gov/vaccine वेवसाईटमा हेर्नुहोस् । कहिले र कहाँ खोप लगाउन सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउन राज्यको www.mass.gov/covidvaccine वेवसाईटमा हेर्नुहोस् ।
यो खोप महामारीको अन्त्य गर्नका लागि एक उपकरण हो ।
कोभिड-१९खोपका साथ मास्क लगाऊनाले र सामाजिक दूरीकायम गराऊनाले हामीलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन मद्दत पुर्‍याउँछ । हामी आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई भेट्न सक्दछौं, बिद्यालयमा फर्केर जान सक्दछौं, वा जीवनलाई जोखिममा नपारीकन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछौं।
खोपमा कुनै पनि जीवित कोरोनाभाइर ससमावेश गरिएको हुँदैन।
मोडर्ना, फाइजर, र जोन्सन खोपमा कुनै पनि जीवित कोरोना भाइरस हुँदैनन् । तपाइँ खोपका कारणबाट कोभिड-१९बाट संक्रमित हुनुहुन्न ।
खोपहरू प्रभावकारी छन् ।
सबै खोपहरू भाइरसबाट बिरामी हुन र यसबाट हुने सम्भावित मृत्यु रोक्न अत्यन्त प्रभावकारी छन् ।
खोपहरूले विस्तृत सुरक्षा जाँचहरू पारित गरेका छन् ।
सुरक्षामा सम्झौता नगरी छिटो छिटो सफल गरिएका व्यापक विश्वव्यापी ठूला-ठूला चिकित्सकिय परीक्षणहरूका प्रयासगरी खोप उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद ।
सब भन्दा राम्रो खोप त्यो हो जुन तपाईंले पहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
यदि तपाईंलाई खोप लगाउने मौका आएकोछ भने पर्खी नरहनुहोस् । यहाँ धेरै खोपहरू उपलब्ध छन्, र ती प्रत्येक खोप कुनै पनि बेला खोप नलिएका व्यक्ति भन्दा खोप लिएका तपाई र अरुलाई स्वस्थ राख्न धेरै प्रभावकारी छन् ।
तपाईलाई अस्थायी प्रकारको असरको अनुभव हुन सक्छ ।
केहि व्यक्तिहरूलाई यो खोपका कारण कुनै प्रकारको असर नदेखिन सक्छ भने कतीलाई अस्थायी प्रकारको असर देखिन पनि सक्छ । सामान्य रुपमा देखिने असरमा दुखाइ, थकान, टाउको दुख्ने, वा हल्का ज्वरो आऊने हुन सक्छन् । तिनीहरू सामान्यतया केहि दिनहरू रहन्छन् ।
कोभिड खोप सबै व्यक्तिको लागि निःशुल्क हो ।
यसमा स्वास्थ्य बीमा नभएका मानिसहरू पनि सामेल हुन पाँऊने छन् । बीमा भएका व्यक्तिहरूले भने खोप लिने समयमा उनीहरूको बिमाको जानकारी साथै ल्याउनु पर्नेछ ।
आप्रवासीहरूले पनि कोभिड खोप लिन सक्छन् ।
तपाईं यसका लागी तपाँई आप्रवास स्थितिको जानकारी नदिईकनै समय तालिका बनाउन सक्नुहुनेछ र नि:शुल्क खोप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । तपाइँलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर सोधिन पनि सक्छ, तर तपाइँले सो प्रदान गर्नु आवश्यक छैन ।
तपाईको व्यक्तिगत जानकारी गोप्य रहनेछ ।
खोप प्रदायकहरूले तपाँईको कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गर्न पाँऊने छैनन् ।
खोप प्राप्त गर्नाले तपाईको ग्रिन कार्ड पाउने सम्भावना लाई असर गर्दैन ।
यस खोपले तपाँईको सार्वजनिक शुल्क/अभियोग निर्धारण तत्वमा कुनै असर गर्दैन ।
कोभिड-१९ खोपको बारेमा जान्नुहोस्, कहाँ खोप लिने थाहा पाँऊनुहोस्, र जानकार रहनुहोस् । somervillema.gov/नेपाली मा हेर्नुहोस् वा (६१७)५९१-३२५५ खोप जानकारी नम्बरमा फोन गर्नुहोस् ।
सहयोग चाहिन्छ ? प्रश्नहरु चन ? ३११(६१७-६६६-३३११) मा फोन गर्नुहोस् ।
कोभिड-१९ खोपका सम्बन्धमा परशुराम फुयाल (समुदाय समन्वय विज्ञ तथा नेपाली सहयोगी, समरभिल सिटिः आप्रवासी मामिलाको कार्यालय) र स्वास्थकर्मीहरु विचमा भएको छलफल